MSF oo ku Baaqday Kordhinta Gargaarka
Hay'adda Dhakhaatiirta aan Xuduudda lahayn ee MSF ayaa ku boorisay dhinacyada Soomaalida, Kenya iyo Itoobiya fududeynta gargaarka.
Hay’adda Dhakhaatiirta aan Xudduuda Lahayn ee MSF, ayaa ku boorisay dhinacyada Soomaalida, dalalka deriska ah, iyo beesha caalamku inay si la taaban karo u ballaariyaan gargaarka dadka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka, meeshana laga saaro wax kasta oo caqabad ku ah ballaarinta hawlaha gargaarka ee gudaha Soomaaliya.
Dhibaatada abaareed ee hadda ka jirta gobolka, waxay si ba’an u saameysay dalka Soomaaliya. Si loogu kuur galo baaxadda ay la egtahay baahida, jawaab deg deg ahna laga bixiyo, MSF waxay sheegtay inay muhiim ah in la helo xorriyad iyo dariiq la maro.
Iyadoo gargaarka la hayo uu aad u kooban yahay, haddana waxaa todobaad kasta xeryaha kala duwan ee laga sameeyay xuduuddaha Kenya iyo Itoobiya soo gelaya dad aad u dhibaateysan, iyadoo sheegtay in qoysaska qaxootiga Soomaaliyeed ee dhibaateysan uu dib uga dhaco gargaarka deg degga ah ee ay u baahan yihiin, ka dib marka ay wakhti dheer ku sugnaadaan barta xuduudda lagaga soo galo.
Kooxo MSF ka tirsan waxay soo tebinayaan in nafaqa darridu ay sarreyso, iyadoo saddexdii caruur ah uu mid ka mid nafaqa darri la liito.
MSF waxay sheegtay in xarrumaheeda quudinta ay ku daweyso inka badan 10,000 oo caruur ah oo aad u nafaqadarroobay.
Agaasimaha hawlgallada MSF, Jean Clement Cabrol, waxa uu ku booriyay dalalka Kenya iyo Itoobiya inay ahmiyadda siiyaan furista xeryo cusub, ayna ballaariyaan kuwa hadda dhisan.